Miseho amin’ny endrika maro izany izay nahatratra 12 isa tato anatin’ny enim-bolana voalohany, raha araka ny salan’isa azon’ny minisiteran’ny fiarovam-pirenena. Tsy nitazam-potsiny izy ireo ka olona miisa dimy hatreto no efa nampidirina am-ponja vonjimaika taorian’ny fanadihadiana natao azy ireny. Ankoatra izay dia nisy ihany koa ny fanentanana sy ny ady maro samihafa nataon’ny polisim-pirenena iadiana amin’ny herisetra mianjady amin’ireo voasokajy ho marefo toy ny zaza amam-behivavy. Ankizy miisa 2.726 no efa nanaovan’izy ireo fanentanana mikasika ny zony mba hahafahana miaro azy. Lohalaharana tamin’izany ny fampirisihina azy ireo hiantso ny laharana maitso raha misy tranga hafahafa miseho narahin’ny fampahafantarana ny voka-dratsy sy ny voka-tsoa ateraky ny fampiasana tambajotran-tserasera na ny facebook. Manatanteraka atrikasa eny amin’ny efitrano fandraisana fivoriambe eny Ivato nanomboka omaly ny fianakaviamben’ny minisiteran’ny fiarovam-pirenena, hifarana anio. Tanjon’izy ireo ny hanatsarana hatrany ny paikady hoenti-miady amin’ireo mpanao ratsy hahafahana mamerina amin’ny laoniny ny filaminam-bahoaka eto amintsika.